Chikamu chekushanyirwa: kutora hanya muzhizha | Ehupfumi Zvemari
Chikamu chekushanya: kutora hanya muzhizha
Patinenge takanyura mumwedzi inodziya yezhizha, hunhu hwesangano rekushanya ndidzo dzimwe pfungwa dzekufunga nezvadzo kuti kuchengetedza kunobatsira mune ino nguva yegore. Iko iyo mushanyi inoyerera ine yakakosha chaizvo uye inobatsira mutengo wemasheya ayo ari muchinzvimbo chekukoshesa. Zvakajairika kuti rudzi urwu rwehunhu hukosheswe panguva ino yegore, nepo kugadziriswa kwakakosha kwazvo kuchiitika mumwaka wakasara wegore. Chero nzira, zvakagadziriswa neimwe nzira yekuti vashoma uye varipakati varimari vanofanirwa kuita kwavo kuchengetedza kunobatsira kubva panguva dzino chaidzo.
Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti chikamu chekushanya chinomiririra indasitiri yekutanga munyika. Iko kwakakosha zvikamu senge mahotera, vashanyi masevhisi uye mitsara yemhepo aripo. Mukati meiyo inosarudzika indekisi yeSpanish equities pane matatu chete maitiro anosangana nehunhu uhu: IAG, Sol Meliá naAmadeus. Nemaitiro akasiyana muinenge hafu yekutanga yegore yatakadya mugore rino 2019. Zvisinei, mwedzi yezhizha inguva yakanaka yegore yekuita mashandiro nemaitiro aya mumisika yemari.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zhizha inguva iyo painokurudzirwa izvo masevhisi ako kana zvigadzirwa zvinowanikwa kana kudyiwa nevashandisi. Nekukosha kwakakosha pane chirevo chemari yemakambani aya uye izvo zvinogona kukonzeresa kuti mutengo wemasheya avo unzwisise mumwedzi iyi panoitika mazororo. Naizvozvo, ivo vachakwanisa kubatanidza iyo portfolio yekudyara kubva zvino zvichienda mberi nechinangwa chikuru chekuwedzera purofiti yemabasa aya. Pamusoro pehumwe hwaro hwekufunga.
1 Chikamu chekushanya: zvikamu zvakasiyana
2 Nei iri nguva yekudyara?
3 Sol Meliá: kumwe kuvhura
4 NH inovandudza mhedzisiro
5 Dzimwe nzvimbo mu2019 muIberia
6 Kubatana neItari nePortugal
Chikamu chekushanya: zvikamu zvakasiyana
Chero zvazvingaitika, makambani mune ino yakakosha chikamu chehupfumi hwenyika haana mitsara yakafanana yebhizinesi. Kana zvisiri, pane kudaro, icho chikamu chinozivikanwa nekuve zvakasiyana kwazvo sezvo mafomati akati wandei aripo mumabhizinesi mitsara. Kubva kumahofisi ekushambadzira akawanda kuenda kunhandare dzakakosha kwazvo uye zvine mutsindo kupfuura nepasi rese emaketeni ehotera. Nenongedzo yemubatanidzwa pakati pavo vese uye ndiko kupihwa kwebasa rehunhu hwevashanyi. Kunyangwe munyika medu mumiriri mumisika yemari iri shoma kushomeka zvichienderana nebasa rinoitwa nekutashanya muhupfumi hweSpain.
Mukati meichi chirevo chizere, ndeimwe yemabheji emisika yemasheya anodiwa kwemwedzi yezhizha. Iko a kuwedzera basa yavo yemabhizinesi modhi. Ehezve, zvakanyanya kupfuura pane dzimwe nguva dzegore, uko chiitiko chayo chakadzikira zvakanyanya nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Mupfungwa iyi, inogona kuve kubheja kuvhura zvinzvimbo mune mamwe emakambani akanyorwa sezvo vachibvumidza kuwana mibairo muhomwe munguva pfupi yakadaro. Ichokwadi kuti izano risingavimbiswe, asi iro rinowanzoitwa nekureruka kukuru mumwedzi iyi yegore.
Nei iri nguva yekudyara?
Kusarudzira hunhu uhu mumwedzi yezhizha kunogona kuve yakasarudzika sarudzo sisitimu yekugadzirisa mashandiro mumisika yekurendesa. Nezvikonzero zvakati wandei uye pakati pazvo zvinomira pachena kuti makambani aya angangokwira mukusara kwegore. Zvakare nekuve tsika dzisina hune zvakawanda zvine chekuita neiyo kutenderera kwehupfumi, kunyange hazvo chinhu ichi chichigona kuvabatsira kuzadzisa zvinangwa zvavo zviripo. Nedzinodakadza kudzoka kune zvido zvevanonyanya kuchengetedza vashoma nepakati varimi.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kuti uzive kuti idzi tsika hadzisi idzo dzine kuita kwakanyanya mumwedzi ichangopfuura. Kunyangwe paine kuderera kwakakosha, senge mune chaiyo kesi yemaketani ehotera ayo anoratidza kwakanyanya kurasikirwa mumutengo wavo. Kunyangwe pane zvinopesana, ivo vane inonyanya kuzivikanwa kumusoro kwekugona kupfuura mune mamwe matunhu emisika yemari. Chero zvazvingaitika, ivo vanonyudzwa muiyo bearish nzira yeimwe kusimba umo kutengesa kuri kutonga zvakanyanya kutenga.
Sol Meliá: kumwe kuvhura
Iketani yeSpain hotera Melía Hotels Internacional yakazivisa kuti yakagadzirira kuvhura makumi mashanu mahotera mahofisi na50 sechikamu chehurongwa hwayo hwekuwedzera mumisika dzakasiyana pasirese, pakati payo Mexico inomira, uko iro boka raita mari kumahombekombe. of Cancún. "Sekambani yechitatu pakukura muhotera muEurope uye mutungamiri muSpain, iro Boka rinoramba richiisa mari mumisika, senge Spain, kuburikidza nekusimbisa uye kumutsidzira kwazvino zvivakwa pamwe nekuvhurwa kutsva, zvichikura kuenda kumisika iri kusimukira, kusanganisira matunhu. Asia-Pacific ne Africa ”, inoratidza siginecha munhaurwa.
Ye2019, kambani yakavambwa muna 1956 inoronga kuendesa 29 mahotera mahotera muAsia, Africa, Europe neAmerica, pakati payo iyo Paradisus Playa Mujeres, iyo ichavhura madhoo ayo pakati pegore rinouya. Iyo inzvimbo yekutandarira iri mu Playa Mujeres, iyo ichave iine makamuri makumi mana nepfumbamwe, makumi matatu nemashanu kubva kuCancun International Airport uye maminetsi gumi chete kubva kudhorobha. "Paradisus Playa Mujeres ichapa mukana kune imwe marina yakazvimiririra, kwavanogona kufamba mugungwa reCaribbean uye kunakidzwa nemaonero anonakidza."
NH inovandudza mhedzisiro
Muna 2018 NH Hotel Boka rakapfuura fungidziro dzepamberi dzegore, richizadzisa mhedzisiro yepamusoro munhoroondo yaro. Iyo kambani yakawedzera zvakapetwa mhindu yayo inodzokororwa, kusvika ku € 72 mamirioni; mari dzayo dzakawedzera ne4,6%, kusvika pamamirioni 1.623 emamiriyoni; iyo EBITDA yakawedzera ne14%, kusvika pamamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemashanu emadhora, uye yakadzora zvakanyanya chikwereti chayo chemari, kusvika -171 mamirioni euros (0,6 times EBITDA).
Boka rinosimbisa EBITDA tarisiro yemamirioni 285 emamiriyoni e2019 uye inodzokororwa mambure purofiti kutenderedza zana mamirioni euros Nezvaitarisirwa izvi, Bhodhi reVatungamiriri veKambani vanozo funga kuMusangano unotevera weVashandi vazhinji mugove wemasendi gumi nemashanu pamugove, nekuda kwemhedzisiro ye2018, pamwe nekufungidzirwa kupihwa mari inosvika kumamirioni makumi mashanu neshanu euros.
Iye CEO weNH Hotel Boka, Ramón Aragonés, anga achinyatsogutsikana nemhedzisiro yakawanikwa mugore. “Iwo mavambo epamusoro ekuvandudza kufambidzana kwedu neMinor International. Tiri kuenda pamwe chete kuseta chirongwa chemakore mashanu chekusimudzira mabhenefiti ekushandira pamwe munzvimbo dzesimba uye kushandisa mukana webhizimusi redu ", akaratidza.
Dzimwe nzvimbo mu2019 muIberia
Iberia ichapa ndege mbiri pasvondo pakati peMadrid neCorfu muna Nyamavhuvhu, nezvirongwa zvinobvumidza kubatanidza chero guta reSpain neparadhiso inoyevedza mvura, inova ndiyo hombe yezvitsuwa zveIonia. Pamusoro peCorfu, muzhizha rino Iberia Boka rinopa ndege kuGreece kuenda kuAthens, Heraklion, Santorini neMykonos. Kune rimwe divi, inosimbisa kuzvipira kwayo kumusika weFrance nenzvimbo iyi pachitsuwa cheCorsica. Ndege ichapa muna Nyamavhuvhu nendege shanu pasvondo kuenda kuBastia - zuva nezuva, kunze kweMuvhuro neChitatu - nezvirongwa zvakasiyana zvinotendera kubatana kwese. Pamusoro peBastia, iro Iberia Boka inopa dzimwe nzvimbo gumi muFrance: Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris (Charles de Gaulle naOlyly), Rennes, Toulouse, Châlons-Vatry.
Italy ichava imwe yemabheti makuru eIberia chirimo chino. Sum nhatu nzvimbo nyowani: Genoa, inoshandiswa naIberia; Verona, uko Iberia Regional Air Nostrum uye Bari ichatobhururuka, yatove kuziviswa neIberia Express. Uye zvakare, Iberia iri kukura muOlbia, iyo, kubva munaKurume kusvika Gumiguru, ichave ichishandiswa neIberia Regional Air Nostrum ine maitirwo matatu evhiki uye, muna Nyamavhuvhu, ichave inzvimbo inopihwa neIberia uye nendege imwe yezuva nezuva.
Kubatana neItari nePortugal
Nedzidzo nhatu idzi nyowani, Iberia Boka rava nenzvimbo gumi nenhatu muItari - Bologna, Florence, Milan (Linate neMalpensa), Naples, Rome, Turin, Venice, Bari, Catania, Cagliari, Genoa, Olbia, Palermo, Verona-, izvo zvinoita kuti ive imwe yemisika yayo ne chikuru kupa muEurope. Imwe nyika iyo Iberia inokura zvakanyanya muzhizha rino ndiPortugal. Iine Lisbon ichaita nendege dzinosvika mashanu ezuva nezuva munzira yega yega; anosvika mana munzira yega yega nePorto asi, pamusoro pezvose, Iberia iri kukura muFaro neFunchal.
Ndege naFaro - idzo dzakamboshanda chete mumwaka wepamusoro wezhizha-, gore rino rakawedzerwa kumwaka wese - kubva munaKurume kusvika Gumiguru- uye, nekuwedzera, imwe frequency yakawedzerwa, inokwana ndege ina pasvondo. Uye zvakafanana zvinoenda Funchal, kupi Iberia Yenharaunda Yemhepo Nostrum Ichapa mafambiro maviri mukati memwaka wezhizha, kubva kupera kwaKurume kusvika Gumiguru.
Sezvaungave iwe waona, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvaunazvo pamberi pako kana pakupedzisira ukasarudza kusarudza chikamu ichi cheSpanish stock market kuti uite zvaunotenga. Nechishuwo chekuita kuti mashandiro abatsire munguva ipfupi inogoneka, zvinova izvo, shure kwezvose, zvauri kutsvaga kuti ubatanidze nenyika inogara yakaoma yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chikamu chekushanya: kutora hanya muzhizha
6 nzira dzekudyara kusimudzira ino chirimo
Madepositi akabatana neEurostoxx 50